Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in mas,uuliyiinta dowlada ay ku... | Universal Somali TV
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in mas,uuliyiinta dowlada ay ku Guuleesteen in si wadajir ah loo Shaqeeyo
Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowlada uu hogaamiyo ay ku guuleysatay in ay ka hortagto isqabqabsigii horay u dhaxmari jiray madaxdii iyo dowladihii ka horeeyay ee dalka soo Maray.
Mr Farmaajo oo xalay casho sharaf sagootin ah ugu sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad aqalka Madaxtooyada ayaa tilmaamay in caqabad weyn ay ku aheyd isqabqabsiga madaxda in hormar laga gaaro Dowladnimada.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dhibaatadaas ay keentay kalsooni darro iyo in ninkasta oo la magacaabo uusan waajibkiisa u gudan sidii loo Baahnaa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti ayaa kaga mahad celiyay madaxda dowlada soo dhaweynta diiran oo ay u sameeyeen intii uu ku sugnaa Dalka.
Inkastoo dowladihii hore ee soo maray ay isqilaafi jireen madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha ayaa dowlada hada jirta waxay ka badbaaday arintaas iyadoo labada mas,uul ee ugu sareeya ay wali Wadashaqeynayaan.
Kan-xigaMadaxweyne Erdogan oo hanjabaad culus...
Kan-horeMadaxweynaha Ismaamulka Puntland oo l...
53,373,322 unique visits